Thet Htoo's: Jovi Tolstoy
ဆရာတော်လ်စတွိုင်း ပြောတာက ဒီလို။ ခင်ဗျားလည်း ကြားဖူးမှာပါ။ ကုန်သည်တစ်ယောက်ဟာ ခရီးသွားရင်း လမ်းမှာ အတူတည်းခိုတဲ့ ကုန်သည်တစ်ယောက်ကို သတ်ပြီး ငွေတွေ ခိုးသွားပါတယ်လို့ အစွပ်ခံရသတဲ့။ ဒီအမှုနဲ့ပဲ အဲဒီကုန်သည်ဟာ ထောင်ကျသွားပါတယ်။ ရင်ခွင်ပိုက်ကလေးတစ်ယောက် အပါအဝင် ဇနီးနဲ့ သားသမီးတွေက ငိုယိုကျန်ရစ်ကြ။ လူတွေရဲ့ အယုံကြည်မဲ့မှုကိုပဲ သူရတယ်။ အသနားခံစာ အဆင့်ဆင့် ပယ်ချခံရ။ ကြိမ်ဒဏ်ခံရပြီးတဲ့နောက် ဆိုက်ဘေးရီးယားကို သတ္တုတွင်း အလုပ်ကြမ်းလုပ်ဖို့ ရောက်သွားတယ်။
အဲဒီမှာ သူဟာ အပြစ်မရှိပဲနဲ့ရတဲ့အပြစ်ပေးမှုကို ၂၆ နှစ်ကြာခံခဲ့ရတယ်။ သူဟာ နေ့ရှိသရွေ့ ဘုရားကိုပဲ အာရုံပြုနေတော့တယ်။ မုတ်ဆိတ်မွေးတွေလည်း ဖြူလို့ပေါ့။ သူ့မိသားစုကို လွမ်းဆွတ်တိုင်းလည်း ဘုရားကိုပဲ အာရုံပြုပြီး ဖြေနေတော့တယ်။ ထောင်တွင်းမှာ ဖြောင့်မတ်မှန်ကန်စွာနေတော့ သူ့ကို အားလုံးက ယုံကြည်လေးစားမှု ရှိကြတယ်။
တစ်နေ့တော့ သူတို့ထောင်ကို မြင်းခိုးမှုနဲ့ လူတစ်ယောက် ရောက်လာသတဲ့။ အဲဒီလူဟာ တကယ်လူသတ်မှုကို ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ တရားခံအစစ်ဆိုတာ စကားစပ်ရင်း အဘိုးအို သိသွားသတဲ့။ အဲဒီ တရားခံအစစ်ကတော့ အသာ ရူးချင်ယောင်ဆောင်နေပါတယ်။ ဒီလိုနဲ့ အဲဒီ လူသတ်တရားခံဟာ ထောင်ကနေ ဖောက်ပြေးဖို့ သူတူးထားတဲ့ အပေါက်ကို ထောင်ပိုင်တွေက တွေ့သွားပါတယ်။ ဒီအပေါက်ကို ဘယ်သူဖောက်လဲဆိုတာ ထောင်ဝန်ထမ်းတွေကလည်း တည်ကြည်ဖြောင့်မတ်တဲ့ အဘိုးအိုကို မေးပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အဘိုးအိုဟာ ဒီလူကို ဝန်ထမ်းတွေ အပြစ်ပေးရင် ကြုံရမယ့် ဝေဒနာတွေကို မခံစားစေချင်လို့ သူ့ကို ထောင်ထဲ ပို့ခဲ့တဲ့သူ ဖြစ်ပေမယ့် ထုတ်မပြောလိုက်ပါဘူးတဲ့။ ဒီတော့မှ တရားခံအစစ်ဟာ အဘိုးအိုကို ခွင့်လွှတ်ဖို့ ငိုကြွေးတောင်းပန်သတဲ့။ ပြီးတော့ အဲဒီ လူသတ်သမားဟာ အဘိုးအို တားတဲ့ကြားက လူသတ်တရားခံအစစ်ဟာ သူဖြစ်ကြောင်း ထောင်ဝန်ထမ်းတွေကို ပြောပြလိုက်ပါတယ်။ အဘိုးအိုကို လွှတ်ဖို့ အမိန့်စာ ရောက်လာတဲ့ အချိန်မှာတော့ အဘိုးအိုဟာ ကွယ်လွန်နှင့်ပြီး ဖြစ်ပါတယ်။ ဝတ္ထုရဲ့ နာမည်က "God sees the truth, but waits" လို့ ဆိုပါတယ်။
ဘုရားသခင်ဆိုတာနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး မေးခွန်းထုတ်ဖို့ ဆိုလိုရင်း မဟုတ်ပါ။ အိုင်စတိုင်းတို့လို ဘုရားသခင် ကြွေအံကစား၊ မကစားဆိုတာနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး ဆွေးနွေး၊ ငြင်းခုံ၊ မေးခွန်းထုတ်ဖို့လည်း မရည်ရွယ်ပါ။ ဒါပေမယ့် Bon Jovi "Hey God"(Video, Lyric) ဆိုပြီး ဘုရားသခင်ကို ဘယ်လို အော်ကြီးဟစ်ကျယ် တိုင်တည်ခဲ့သလဲ ဆိုတာလေးတော့ ဆက်ပြောချင်ပါသေးတယ်။ အတွေးပွားဖို့ သက်သက်ပဲ ဆိုပါ။
''ဟေးးး ဘုရားသခင်၊ ကျုပ်ဟာ အညတရပါ၊ မယားနဲ့ မိသားစုနဲ့ပေါ့ "
သူက အဲလိုလေး သူ့အကြောင်း သူပြောသေးတာ။ ဘုရားသခင်ကိုများ ကျုပ်အကြောင်းလေးမှ တွေးမိပါရဲ့လားလို့လည်း ဆိုထားသေး။ ထားပါတော့။ Chorus လေး ဖတ်ကြည့်ပါလား။
"ဟေးးး ဘုရားသခင်၊ ဘယ်လို သောက်ကျိုးနည်းတွေ ဖြစ်ကုန်ပြီလဲဆိုတာ ပြောပါဦး၊
ရွှေမှုန်ကြဲ နောက်ချေးပုံတွေတောင် ပျောက်ဆုံး"
ဘာသာပြန်တာတော့ ကိုယ်မြင်သလိုပဲ ပြန်ထားတာပါ။ အတိအကျလည်း ဟုတ်ချင်မှ ဟုတ်မှာ။
တော်စတွိုင်းကြီးနဲ့ ဘွန်ဂျိုဗီတို့ကတော့ တစ်ယောက်တစ်မျိုးစီ ပြောသွားတာပဲ။ သူတို့နှစ်ယောက် ပြောတာကို ဝါကျတစ်ကြောင်းတည်း ရေးကြည့်ရင် ဒီလိုများ ရမလားပဲ။
Hey God, Tell me, what the hell are you waiting for !!!
ခင်ဗျားရော... ဘယ်လိုထင်လဲ ?
ရေးသူ = မျက်လုံး | ရေးသားချိန် = 12:28:00 AM